बामदेवकाे पुनरागमन लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र राजनीतिक अनिष्टताको संकेत : डा. भट्टराई - Everest Dainik - News from Nepal
बामदेवकाे पुनरागमन लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र राजनीतिक अनिष्टताको संकेत : डा. भट्टराई
नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बर्दियाबाट पराजित बामदेव गौतमका लागि काठमाडौं ७ मा उपचुनाव गराउनु चरम राजनीतिक अनिष्टताको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै उनले यसलाई लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण भएको बताएका छन् ।
ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौं ७ का निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर बर्दियाबाट हारेका वामदेव गौतमलाई संसदमा पुर्याउन अर्को खर्चिलो चुनाव गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र आगामी दिनमा चरम राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो । बेलैमा होस पुर्‍याऔं !’
नेकपाले काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत बामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस डा. बाबुराम भन्छन्- संविधान संसोधन गर्न छोडेर सडकमा किन तमासा